Konke Okufanele Ukwazi Nge-Tadalafil - Buyaas
1. Yini i-Tadalafil powder?
Tadalafil powder (I-171596-29-5) umuthi onikezwa umuthi otholakala ngezindlela zomlomo ezihlukene njengethebhulethi ne-powder. Lesi sidakamizwa siyatholakala emakethe ngaphansi kwamagama ohlobo oluhlukile njenge-Adcirca neCialis. Futhi, i-tadalafil ikhona ngohlobo lwayo olujwayelekile. Kodwa-ke, awulekwa ukuthi usebenzise i-generic tadalafil powder ngoba ingahle ilahlekelwe yiwo wonke amandla emithi yangempela; ngakho-ke, udinga ukuqaphela kakhulu lapho uthenga lo muthi onjenge-tadalafil. Qinisekisa ukuthi uthenga ifomu elifanele le-tadalafil ngemiphumela engcono. Udokotela wakho uzokuqondisa ukuthi ungawuthenga kuphi futhi kuphi ikhwalithi ye-Tadalafil powder.
I-Tadalafil (171596-29-5) isetshenziswa ngaphansi kwamagama e-brand ahlukene ukuphatha izimo ezahlukahlukene zempilo. Isibonelo, i-Cialis isetshenziswa kakhulu ekwelapheni ukungasebenzi kahle kwe-erectile noma ukungasebenzi kahle emadodeni kanye ne-benign prostatic hypertrophy, evame ukubizwa ngokuthi i-prostate enwetshiwe. Ngakolunye uhlangothi, i-Adcirca, nayo engenye uphawu lwe-tadalafil, isetshenziswa ekwelapheni umfutho wegazi ophakeme we-pulmonary arterial. I-Adcirca isetshenziselwa futhi ukuthuthukisa amandla okuzivocavoca kuwo womabili amadoda nabesifazane abahlushwa umfutho wegazi ophakeme we-pulmonary arterial.
Kuhlale kukuhle ukuthi uthathe lo muthi ngaphansi kokuholwa udokotela wakho ukuze ugweme ukuthola imiphumela emibi kakhulu. Akunandaba ukuthi ungafinyelela kanjani kalula i-tadalafil powder musa ukuyithatha ngaphandle kokuhlolwa udokotela. Ngoba umuthi ubesebenzela umngani wakho, akuwona othomathikhi ozokulethela imiphumela esezingeni. Imizimba yabantu ihlukile, yingakho udokotela wakho kufanele akhethele umthamo ofanele ngemuva kokuhlola isimo sakho sempilo. Uma isetshenziswe kabi noma isetshenziswa ngokweqile, i-tadalafil ingaholela emiphumeleni emibi kakhulu ebiza kakhulu ukubuyisa futhi kwesinye isikhathi engenakuphikwa ngokuphelele.
2.Ngabe i-Tadalafil powder isebenza kanjani?
I-Tadalafil powder iphakathi kwemithi engokwesigaba sezidakamizwa esaziwa ngokuthi yi-phosphodiesterase hlobo i-5 inhibitors (PDE5). Zonke izidakamizwa ezikulesi sigaba zisebenza ngendlela efanayo futhi zisetshenziswa ngabezokwelapha ukwelapha cishe izimo ezifanayo zempilo. Imvamisa, izidakamizwa zihlukaniswa ngamaqembu ahlukene abizwa ngezifundo. Amaqembu ahlanganisa izidakamizwa ezinezakhiwo ezifanayo futhi ezisebenza ngendlela efanayo. I-Tadalafil isiza ekuphumuleni kwemisipha yesinye kanye nemisipha yasesiteji, okuthuthukisa izimpawu zakho ze-benign prostatic hyperplasia (BPH) ezibandakanya; izinhlungu ngenkathi uchama, inkinga yokuchama kanye nesidingo esiphuthumayo noma esivamile sokuchama.
Lesi sidakamizwa sibuye sikhuphule ukugeleza kwegazi lomzimba wakho ukuya ethweni lomzimba, nalo elisiza ekutholeni nasekugcinweni kwendalo. I-Tadalafil isetshenziswa kakhulu ekwelapheni ukungasebenzi kahle kwe-erectile emadodeni, kepha kukusiza kuphela uma uvuswa ucansi. Ukuqanjwa kwamacala penal kwenzeka lapho penis ugcwele igazi. Ukuqalwa kwenzeka ngemuva kokuthi imithambo yegazi ebhekele ukuhambisa igazi ijulise futhi ithuthukise ukulethwa kwegazi ngenkathi leyo inikezwe umsebenzi wokususa igazi kwinkontileka yepenisi. Lapho igazi linqwabelana embizeni yakho, kubangela ukwakheka. Ucwaningo luye lwabonisa i-tadalafil ithuthukisa amandla okuthola ama-erections alukhuni futhi azinzileyo iningi lamadoda ane-erectile dysfunction.
Kwi-PAH, lesi sidakamizwa siphumuza imithambo yegazi yakho emaphashini akho ukukhulisa ukuphuma kwegazi, okubuye kuthuthukise amandla akho okuvivinya umzimba. Lapho uthatha lesi sidakamizwa, uzoba-ke namandla anele okusebenza amahora amaningi futhi ufeze izinhloso zakho ngesikhathi esifushane kakhulu.
3.Ungayithatha kanjani i-Tadalafil powder?
Iseluleko seMedical ukuthi kufanele uthathe i-tadalafil powder okungenani imizuzu ye-30 ngaphambi kokuzibandakanya kwakho ocansini. Umuthi uzoba wusizo uma uwuthatha noma ungadli. Kufanele uthathe i-tadalafil kuphela uma ufuna ukuya ocansini. Kodwa-ke, emadodeni angathanda ukwenza ubulili obuzenzakalelayo amahlandla amathathu noma ngaphezulu ngeviki, angaya komthamo wansuku zonke, oza ngemithamo emibili, i-2.5mg ne-5mg. Umthamo ophakanyisiwe ngosuku yi-10mg, kepha uma kunganele kuwe, khona-ke umuthi wakho ungakhulisa umthamo ube yi-20mg. Noma kunjalo, bonisana nodokotela wakho ngaphambi kokushintsha umthamo ukuze ugweme imiphumela emibi ye-tadalafil powder esezingeni eliphakeme.
I-Tadalafil kufanele ithathwe kanye kuphela njalo emahoreni we-24. Lapho ungatholi ama-erections owawulindele, ungangezi omunye umthamo ngosuku olufanayo. Kujwayelekile kakhulu kubasebenzisi be-tadalafil okokuqala ngqa ukuthola ukubambezeleka ekutholeni imiphumela oyifunayo. Imizimba yabantu ihlukile, njengoba kushiwo ngaphambili kule ndatshana. Abanye abantu bangathola imiphumela ye-tadalafil powder phakathi nesikhathi semizuzu ye-30 ngenkathi abanye behlangabezana nokubambezeleka. Kodwa-ke, odokotela batusa ukuthi uphuze umthamo wezidakamizwa cishe izinsuku eziyisishiyagalombili ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuya komthamo ophakeme noma enye indlela yokwelashwa ehlukile.
Akufanele uthathe i-tadalafil powder nanoma yiziphi ezinye izidakamizwa ezingasebenzi kahle ze-erectile. Ngakho-ke, yazisa udokotela wakho uma uphuza noma yimuphi omunye umuthi we-ED ngaphambi kokuqala umthamo wakho we-tadalafil. Noma kunezindlela ezahlukahlukene ze-tadalafil emakethe, njenge-sildenafil, Viagra, Spedra, neCialis, akufanele uzibeke engcupheni yokuthatha enye yazo nge-tadalafil; kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu. Thatha eyodwa kuphela ngesikhathi kodwa ngaphansi kweseluleko udokotela wakho. Ngaphandle kwalokho, uma uthatha noma yisiphi isidakamizwa se-nitrate ukwelapha izinkinga zenhliziyo noma izinhlungu zesifuba ezifana ne-isosorbide dinitrate, i-nitroglycerin, isosorbide mononitrate, nezidakamizwa zokuzijabulisa ezinjenge-poppers, uyalulekwa futhi ukuthi ungahlali kude ukuthatha i-tadalafil powder. Ukuhlanganisa i-tadalafil nanoma yisiphi isidakamizwa se-nitrate kungaholela ekwehleni okukhulu kwengcindezi yegazi.
Ukuze ube sohlangothini oluphephile, yazisa udokotela wakho ngayo yonke imishanguzo oyiphuzayo noma uma ungaphansi kokunye ukwelashwa ngaphambi kokuthi uqale ukuthatha i-tadalafil. Uma kwenzeka uzwa ama-erections abuhlungu, noma ama-erections athathe isikhathi eside kunamahora we-4 abuye azise umuthi wakho ngokushesha. Okwenziwe isikhathi eside kungalimaza izicubu zakho zepipi. Futhi, uma ungayingeni i-tadalafil, ungazifaki engozini yokuyithatha bese wenza udokotela wakho azi ukuthi uzokutholela enye indlela ephephile. I-Tadalafil iyisidakamizwa esinamandla kakhulu sokungasebenzi kahle kwe-erectile, kepha kufanele sithathwe ngokunakekelwa okuningi ukugwema imiphumela ethuthukile. Namathela kumithamo enqunyelwe ukuthola imiphumela engcono.
4.I-Tadalafil powder Use
Ngokuvamile, i-tadalafil powder isetshenziswa ekwelashweni kwezinkinga zomsebenzi wobulili wesilisa njengokuqina nokungasebenzi kahle kwe-erectile. Ngaphandle kokukhuthaza ukuvusa inkanuko yezocansi, i-tadalafil ibuye ithuthukise ukuphuma kwegazi ungene ethweni ukusiza indoda ukuthola futhi iqinise ukwakheka okuqinile isikhathi eside. Lesi sidakamizwa saziwa ngokusiza abesilisa ukuthi babe nesikhathi eside sokwenza ucansi. Abasebenzisi be-Tadalafil bathokozela ukwakhiwa okuqinile futhi okude. Kodwa-ke, umuthi kufanele uphuzwe kanye kuphela ngosuku nemizuzu ye-30 ngaphambi kocansi.
Ngakolunye uhlangothi, i-tadalafil powder nayo isetshenziswa ekwelapheni kwezimpawu ze-benign Prostatic hyperplasia (BPH). Umuthi uphumuza izimpawu ze-BPH ezinjengokusakazwa okubuthakathaka, ubunzima bokuqala kokuhamba komchamo, nokuchama kaningi, ikakhulukazi phakathi nobusuku. Lapha i-tadalafil ikusiza ngokuphumuza isisulu esibuthakathaka kanye nemisipha yesibindi. Noma kunjalo, ungathengi bese uqala ukusebenzisa i-tadalafil powder noma ngabe uhlangabezana nezimpawu ze-BPH ngaphambi kokuhlolwa udokotela. Khumbula ukuthi umuthi kufanele unqunywe uchwepheshe wezokwelapha ngaso sonke isikhathi.
Udokotela ubuye anikeze i-tadalafil powder kubantu abane-pulmonary arterial hypertension (PAH). Lesi yisimo lapho kunomfutho wegazi ophakeme emithanjeni yakho ethwala igazi uye emaphashini, futhi okuholela kusiyezi, ukuphefumula ngokushesha, nokukhathala. Abantu abaningi abahlushwa yilesi simo bakuthola kunzima ukwenza izivivinyo njalo. Kodwa-ke, izindaba ezimnandi ukuthi i-tadalafil powder idlala indima ebalulekile ekusizeni iziguli ze-PAH ukuba zenze umsebenzi wazo ngokunethezeka ngokunciphisa imiphumela yesimo emzimbeni.
Kodwa-ke, i-tadalafil ngeke ikuvikele ezifweni ezithathelwana ngocansi, ezibandakanya i-hepatitis B, i-HIV, i-syphilis kanye ne-gonorrhea, phakathi kwabanye. Konke kukho konke, qiniseka ukuthi unezocansi oluphephile futhi oluvikelwe ngaso sonke isikhathi. Uma kwenzeka ungaqiniseki ngokuthi ungazivikela kanjani ocansini, ungasebenzisa ikhondomu ye-latex. Ngeminye imininingwane, thintana nosokhemisi wakho noma udokotela.
5.Umthamo we-Tadalafil powder
Umthamo we-Tadalafil ungahluka kusuka komunye umsebenzisi uya komunye, ngokuya ngesizathu sokusetshenziswa kwawo. Isimo sakho sempilo nokuthi umzimba wakho usabela kanjani kulo muthi nawo uzosithinta isilinganiso sakho. Kodwa-ke, kuhlale kukuhle ukuthi uqale ngomthamo ophansi onconyiwe, ongangezelelwa kamuva ngudokotela wakho ngemuva kokuhlola inqubekela phambili yemithi. Ungalokothi uguqule umthamo ngaphandle kokwazisa umuthi wakho ngoba kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu noma wehluleke ukuletha imiphumela elindelekile. Imithamo ye-Tadalafil powder kukhona kanje;
Umthamo We-Erectile Dysfunction Dosage
Le dosage ye-tadalafil powder yenzelwe owesilisa onobunzima ekutholeni nasekusekeleni ama-erections alukhuni. Imithamo yokuqala enconywayo yi-10mg okufanele ithathwe ngomlomo kanye ngosuku noma imizuzu ye-30 ngaphambi kokungena ezenzweni zocansi. Uma ungayiboni imiphumela, kufanele uqhubeke nokuthatha umthamo wakho ojwayelekile izinsuku ezingafika kweziyisishiyagalombili, bese uvakashela udokotela wakho ukuyolungisa umthamo. Abanye abantu bathola ukubambezeleka ekutholeni imiphumela, ikakhulukazi okokuqala abasebenzisi be-tadalafil. Kodwa-ke, umthamo ungakhuphukela ku-20mg ngosuku. Ukulungiswa komthamo we-tadalafil powder kusuka ku-5 kuya kuma-20mgs okufanele athathwe kanye ngosuku ngosuku oludingekayo noma ngaphambi kokwenza ucansi. I-Tadalafil yomthamo we-ED incike ekubekezelelekeni nasekusebenzeni ngakunye. Umthamo ung kwehliswa ngokuqhubekayo kubasebenzisi abathola imiphumela emibi esezingeni eliphakeme ngisho nangemva kokuthatha umthamo ophansi kakhulu wama-10mgs ngosuku.
Ukusetshenziswa kwe-tadalafil powder yansuku zonke, umthamo wokuqala womlomo kanye ngosuku yi-2.5mg futhi kufanele uthathwe ngasikhathi sinye nsuku zonke, ngaphandle kokubheka isikhathi somsebenzi wokwenza ucansi. Lomthamo wenzelwa abasebenzisi abangafisa ukulala nabo amahlandla amathathu noma ngaphezulu ngesonto. Lapha, umthamo wokulungisa usukela ku-2.5 uye kuma-5mgs ngosuku futhi kufanele uthathwe ngomlomo kanye njalo ngamahora we-24.
Umthamo we-Tadalafil powder weBenign Prostatic Hyperplasia (BPH) nokungasebenzi kwe-erectile (ED)
Ungathatha futhi i-tadalafil ukuphatha izimo ezimbili ngasikhathi sinye, ezingaba izindaba ezinhle kubasebenzisi. Ukwelashwa okuphumelelayo kwe-ED ne-BPH, umthamo ophakanyisiwe umthamo wansuku zonke we-5mg, okufanele uphuzwe ngomlomo cishe ngasikhathi sinye. Lapha, akudingeki ukuthi ubheke izikhathi zakho zocansi kepha unamathela kumiyalo yomthamo ukufeza imiphumela oyifunayo. Thatha umthamo wakho kuze kufike lapho udokotela wakho ekucebisa ukuthi ume ngemuva kokuhlola inqubekela phambili yakho yemithi.
Umthamo weTadalafil powder Pulmonary Hypertension
Ukuze uthole ukwelashwa okuphumelelayo kwe-Pulmonary Hypertension, kuzodingeka uthathe i-tadalafil powder 40mgs kanye ngosuku. Akufanele uhlukanise umthamo we-40mgs ngosuku noma ukwandisa noma ukwehlisa umthamo.
Umthamo we-tadalafil wabantu abadala weBenign Prostatic Hyperplasia
Ukwelashwa kwe-BPH, kufanele uthathe umthamo we-5mgs ngomlomo we-tadalafil kanye ngosuku futhi uqiniseke ukuthi uyithatha cishe isikhathi esifanayo nsuku zonke cishe amasonto we-26. Udokotela wakho angaphinde akhuphule noma anciphise umthamo wansuku zonke ngokuya ngokuthi umzimba wakho uphendula kanjani ngemithamo emavikini ambalwa okuqala. Uma kwenzeka uthola imiphumela emibi esezingeni eliphakeme njalo thintana nodokotela wakho ngesikhathi ngaphambi kokuba isimo sibe sibi.
6.I-Tadalafil powder isigamu sempilo
Tadalafil powder ukuphila okungaphelele ihlala isebenza emzimbeni wakho cishe amahora we-36 ngemuva kokuthatha umthamo wakho. Lokho kwenza i-tadalafil ibe yisinqumo esihle sabasebenzisi abaningi abafuna ukuthuthukisa ulwazi lwabo lwezocansi. Ukuphuza i-tadalafil powder nsuku zonke kuzokusiza ekutholeni ama-firmer kanye nama-erections amade ngemuva kokuthatha umthamo cishe wezinsuku ezintathu kuya kwezinhlanu zokusetshenziswa kokuqala. Kwabesilisa abangasabeli kahle kuma-dosages aphezulu, ukuthatha umthamo wansuku zonke we-tadalafil kuzoba usizo kakhulu. Imithamo yansuku zonke ilungile ekuhlinzekeni cishe ukuthuthuka okubalulekile ku-drive yakho yocansi.
Kuhlale kukuhle ukuthi uthathe imithamo ye-tadalafil powder kanye ngosuku futhi uma ungatholi imiphumela ungathathi omunye umthamo emahoreni we-24. Imiphumela ye-Tadalafil powder ingahle ibambezele abanye abasebenzisi, kodwa lokho akusho ukuthi kufanele uthathe umthamo owengeziwe ngosuku olufanayo. Abasebenzisi be-tadalafil powder okokuqala ngqa bangathola ukubambezeleka, kepha ngokuhamba kwesikhathi bathola ukwakheka okufunayo.
7.Imiphumela emibi ye-Tadalafil powder
Njengoba i-tadalafil powder iyisidakamizwa esinamandla ebesilokhu sisiza abantu ekwelapheni izimo zempilo ezahlukahlukene, uma sisetshenziswe kabi noma sisebenzisa ngokweqile ngokweqile singakuvezela eminye imiphumela emibi. Ubukhulu be imiphumela ye-tadalafil powder side kungenxa yokusebenzisa kabi nokuthi umzimba wakho uphendula kanjani kulo muthi. Imvamisa, abanye abantu bangahle bahluleke ukujabulela izinzuzo zezidakamizwa ngisho nangemva kokuthatha umthamo ofanele. Abanye abasebenzisi futhi bangathola imiphumela emibi embalwa kunabanye. Eminye imiphumela emibi ye-tadalafil ingahle ihambisane nesikhathi, futhi imi ngale ndlela elandelayo;
Ukulimala kwekhanda kuvame kakhulu ngenkathi uthatha i-tadalafil yakho powder. Ungahle ube nokushiswa yinhliziyo, ukushayeka, isicanucanu, ukushintshashintsha, uhudo kanye nokukhwehlela. Ubuhlungu emhlane wakho, esiswini, emilenzeni, noma ezingalweni buyejwayelekile kakhulu kubasebenzisi abaningi be-tadalafil. Njengoba kushiwo, le miphumela kufanele inyamalale isikhashana, kepha uma kwenzeka ihlala isikhathi eside kunokulindelwe ukuthi yazise udokotela wakho ukuthi akusize uthole isixazululo. Izindaba ezimnandi ukuthi cishe yonke le miphumela emibi ye-tadalafil ingalawulwa.
Kukhona neminye imiphumela emibi kakhulu ukuthi kufanele ufune usizo lwezokwelashwa ngokushesha uqala ukubhekana nayo, futhi ifaka phakathi;
Ukulahleka kombono noma umbono owufiphele lapho uthatha i-tadalafil. Abanye abasebenzisi bangaqala ukubhekana nobunzima embonweni wabo uma sebeqale ukuthatha lo muthi, futhi lapho kwenzeka, shayela udokotela wakho ngesikhathi esifushane kakhulu.
Noma iziphi izinguquko kumbono wemibala kufanele futhi zibikwe ngokushesha esikhungweni sezokwelapha esiseduze noma kuzelamani zakho. Abanye abasebenzisi bangaba nobunzima ekuboneni imibala ethile, njengokutshela umehluko phakathi kokuluhlaza nokuhlaza okwesibhakabhaka.
Izinkinga zokuzwa, ukukhala ezindlebeni, ukulahleka, kanye nokuncipha kwezindlebe kungenye futhi imiphumela emibi umuntu angaba nayo.
Okwenziwe isikhathi eside okuhlala ngaphezulu kwamahora we-4.
Ubuhlungu besifuba nesiyezi, isikhumba esikhonkotha noma ukuqhakaza, ukuqhuma, ukuvuvukala kolimi, amehlo, izindebe nobuso.
Ubunzima bokugwinya noma ukuphefumula kufanele futhi kubhekwane nakho ngokushesha.
Ukwehluleka ukwazisa udokotela wakho ngemiphumela emibi engela ngaphezulu kungaholela ezimweni ezingenakuguqulwa futhi kwesinye isikhathi kungaholela ekufeni. Unganqikazi ukuxhumana nabasebenzi bezokwelapha uma uhlangabezana neminye imiphumela. Ngokulinganayo, ungaqhubeki nomthamo ngaphandle kokuzazisa ngemithi yakho ngoba kungaholela ezinkingeni eziningi noma kubhebhethekise isimo sakho. Yonke imiphumela emibi ye-tadalafil iyalawuleka, futhi udokotela wakho uzokweluleka ngokufanele ngemuva kokuhlola isimo sakho.
8.Ukudayiswa kwe-Tadalafil powder
Tadalafil powder ukudayiswa iyatholakala emakethe ezitolo ze-inthanethi noma emakhemisi asemzimbeni. Noma kunjalo, ungayithola ngaphansi kwamagama e-brand ahlukile njengeCialis noma i-Adcirca, ngokuya ngendawo yakho. Lesi yisidakamizwa esikhishwa ngokomthetho ezindaweni eziningi, futhi akufanele ube nokwesaba uma usithola, usithenga noma usingenisa umuthi ezweni. E-United States of America, iTadalafil yavunywa okokuqala kwi-2003 ukuthola ukwelashwa okungasebenzi kahle kwe-erectile, futhi ngokuhamba kweminyaka kukhombisile ukuthi kuyasebenza. I-tadalafil powder iyatholakala kumagremu ahlukene ngokuya ngenani olidingayo ukwelapha isimo sakho.
Ukhululekile ukuba thenga i-tadalafil powder ngobuningi noma kwenele nje osukwini lwakho olulodwa noma lwezinsuku ezimbalwa ngokuya ngesincomo sikadokotela wakho. Baningi abahlinzeki be-tadalafil powder emakethe namuhla, kodwa qiniseka ukuthi uyithola kumkhiqizi nomthengisi odumile. Akubona bonke abathengisi ohlangana nabo emakethe abanazo izidakamizwa ezisezingeni. Khumbula, ukuthola imiphumela engcono futhi esheshayo; kufanele usebenzise i-tadalafil powder esezingeni ngaso sonke isikhathi. Kukhona futhi uhlobo olujwayelekile lwe-tadalafil powder, olungase lintule izimfanelo ezithile futhi lungabi namandla okwanele ukwelapha isimo sakho.
Uma kwenzeka ungaqiniseki ngokuthi uwuthola kanjani noma kanjani umphunga we-tadalafil yekhwalithi, ke ungesabi ukukhuluma nodokotela wakho. Ochwepheshe bezokwelapha bangabantu abahamba phambili ukukubonisa ukuthi ungazitholaphi izidakamizwa abakunikeza zona. Kodwa-ke, kuhlale kukuhle ukwenza ucwaningo lwakho ukuze wazi abakhiqizi be-tadalafil powder abahle nabahlinzeki abasondele kuwe. Qiniseka ukuthi uthenga i-tadalafil powder egcwele kahle ezokwenza kube lula ukuthi uyigcine njengoba uqhubeka nomthamo wakho.
9.Ungayithenga kuphi i-Tadalafil powder?
Umhlaba uyashintsha, futhi ngokungafani nezinsuku ezithile emuva, ungakwenza Thenga i-tadalafil powder online kuwebhusayithi yethu futhi uthole umkhiqizo wakho ngesikhathi esifushane kunazo zonke esingakhona. Ungangena kwisayithi lethu nge-smartphone yakho, ithebhulethi, noma ilaptop bese wenza i-oda lakho ngokunethezeka ekhaya lakho noma ehhovisi. Ngenye indlela, usengathola i-tadalafil powder kusuka ekhemisi lakho lasendaweni. Noma kunjalo, sihlala sicebisa amakhasimende ethu ukuthi aqaphele kakhulu lapho efuna umhlinzeki we-tadalafil powder umhlabeleli noma online noma ngokomzimba. Abanye abathengisi bezidakamizwa bangahle bagcine imikhiqizo esezingeni eliphansi ezokwehluleka ukuletha imiphumela oyifunayo noma bagcine ukukuveza kwimiphumela emibi kakhulu.
Yenza ucwaningo lwakho ngenkampani osuyothenga kuyo i-tadalafil powder kusuka ekuqondeni ukuthi isebenza kanjani. Indlela enhle ukubheka izilinganiso zenkampani nokubuyekezwa kwamakhasimende. Inkampani ehlonishwayo izoba nempendulo enhle nezilinganiso ezinhle kakhulu. Funda isipiliyoni samakhasimende ahlukene bese wenza isinqumo esinolwazi. Ikhasimende elijabule lihlala lincoma amanye amakhasimende kumhlinzeki, futhi abadangele ngeke besabe ukuveza ukudana kwabo. Ungaphuthumi lapho uthenga i-tadalafil powder, thatha isikhathi sakho, utadishe abahlinzeki kanye nabakhiqizi abatholakalayo emakethe. Udokotela wakho angakusiza futhi ekuboneni umthengisi we-tadalafil omuhle kakhulu ozungezile.
Sihola umthengisi we-tadalafil powder esifundeni, futhi sesibe ngaphambi komdlalo iminyaka eminingi manje. Sinikeza imikhiqizo yezempilo esezingeni elifanele kuwo wonke amakhasimende ethu kanye nokwenza ukudiliva okufika ngesikhathi emhlabeni wonke. Iwebhusayithi yethu esebenziseka kalula ikuvumela ukuthi wenze i-oda lakho ngemizuzwana nje futhi ukusuka noma yikuphi. Ungangena kalula kusuka komunye umkhiqizo uye komunye kuwebhusayithi yethu. Imikhiqizo yethu yezokwelapha, efana ne-tadalafil powder igcwele kahle ukugwema noma ikuphi ukungcola ngenkathi isendleleni futhi ikwenza kube lula kuwe ukugcina umuthi. Kodwa-ke, sihlala sicebisa wonke amakhasimende ethu athembekile, ukuthi angaqali ukuthatha izidakamizwa zethu ngaphandle kokuhlolwa udokotela futhi athole nemithi efanelekile kuchwepheshe wezokwelapha.
Yonke imibuzo noma ukukhathazeka nge-tadalafil powder, ukhululekile ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi. Ideski lethu elinakekelayo lokunakekela amakhasimende lizobhekana nazo zonke izingqinamba zakho futhi likusize wenze i-oda epulatifomu yethu. Gcina ufulawa kude nezingane uthathe imithamo enconyiwe yemiphumela engcono. Uma kwenzeka uhlangabezana nanoma yimiphi imiphumela emibi, yazisa udokotela wakho ngezeluleko ezengeziwe nokuholwa.
Le mishanguzo emibili ingeye-phosphodiesterase-5 (PDE5), futhi lokho kusho ukuthi bacishe basebenze ngendlela efanayo. I-tadalafil powder ne-sildenafil citrate powder zinokufana okuningi, futhi zisetshenziselwa ukuphatha ukungasebenzi kahle nokungasebenzi kwe-erectile emadodeni. Kodwa-ke, lezi zidakamizwa zombili zingasebenza kuphela lapho umsebenzisi evuswa. Uma ulandela yonke imiyalo yemithamo, i-tadalafil ne-sildenafil citrate powder ingakusiza ekutholeni ama-erections aqinile futhi ahlala isikhathi eside.
Ngokuya kokusebenza, i-tadalafil powder isebenza ngaphakathi kwe-16 kuya kumaminithi we-45 ngemuva kokuthatha umthamo wakho. Ngakolunye uhlangothi, i-sildenafil iletha imiphumela kungakapheli imizuzu ye-30, futhi uma uthatha ukudla okunamafutha amaningi, kungathinta ukusebenza komuthi. Ngakho-ke, i-sildenafil citrate powder kufanele ithathwe esiswini esingenalutho ukuthola imiphumela engcono. Cishe konke ukusebenza kahle kwe-PDE5 inhibitors kusebenza kuyafana. Kodwa-ke, ngaphandle kokusebenza ngempumelelo kwe-sildenafil emi ku-84% ne-tadalafil e-81%, amadoda amaningi ancamela ukuthatha i-tadalafil powder ngoba inomphumela wokuhlala isikhathi eside.
I-Tadalafil powder ingathathwa lapho idingeka noma nsuku zonke. Ngokuvamile, imithamo yansuku zonke ye-tadalafil incane kunaleyo edingekayo. Isibonelo, i-10mgs ngumthamo wokuqala we-tadalafil ngaphambi kokwenza ucansi. Uma sesithathiwe, imiphumela izohlala cishe amahora we-36. Udokotela wakho angangeza futhi umthamo ube yi-20mg noma wehlise ku-5mg lapho imiphumela emibi ingabekezeleleki. Ngomthamo wansuku zonke, umthamo we-tadalafil powder ophakanyisiwe yi-2.5mg ye-ED ne-50mg lapho welapha i-BPH. Abasebenzisi babuye belulekwe ukuthi bangangezeli umthamo we-tadalafil ngaphandle kweseluleko sikadokotela sokunciphisa imiphumela emibi.
I-Sildenafil citrate powder kufanele ithathwe kanye ngosuku kanye nehora ngaphambi kokuzibandakanya kwakho ocansini. Umuthi kufanele uphuzwe ngesidingo, futhi umthamo onconyelwayo yi-50mgs, ongathatha futhi imizuzu ye-30 noma amahora amane ngaphambi kocansi. Kwezinye izimo, umthamo we-sildenafil citrate powder ungandiswa ku-100mgs uma umthamo we-50mg wehluleka ukuletha imiphumela oyifunayo. Udokotela wakho futhi anganciphisa umthamo oya kuma-25mgs uma uhlangabezana nemiphumela emibi engabekezeleleki. Njenge-tadalafil, i-sildenafil citrate powder kufanele ithathwe kanye ngosuku noma ungatholi imiphumela ngaphakathi kwamahora we-4.
Le mishanguzo emibili, uma isetshenziswa ngokweqile noma isetshenziswe kabi, ingaholela emiphumeleni emibi ecishe ifane nokufafaza, ikhanda, nokugayeka. Kodwa-ke, ukuqonda kombala kuhlobene kakhulu ne-sildenafil citrate powder. Izindaba ezimnandi ukuthi yonke imiphumela emibi yezidakamizwa ingalawulwa uma ufuna ukwelashwa ngokushesha. Zizwe ukhululekile ukubonana nodokotela noma usokhemisi ukuthola eminye imininingwane mayelana i-tadalafil powder ne-sildenafil citrate powder.
Kukreja, RC, Salloum, FN, Das, A., Koka, S., Ockaili, RA, & Xi, L. (2011). Ukusetshenziswa okusha okukhona kwe-phosphodiesterase-5 inhibitors kwezifo zenhliziyo. Isayensi Yezenhliziyo & Yeklinikhi, 16(4), i-e30.
Iningi, i-ME, i-Senbel, i-AM, ne-Mostafa, T. (2013). Umphumela we-tadalafil yesilinganiso esiphansi esingama-patileous izicubu ezithweni zamagundane ezinesifo sikashukela. Urology, 81(6), i-1253-1260.
UKaya, B., Çerkez, C., Işılgan, SE, Göktürk, H., Yığman, Z., Serel, S.,… & Ergün, H. (2015). Ukuqhathanisa imiphumela ye-sildenafil ye-systemic safenafil, kanye ne-vardenafil ekwelapheni kokusinda kweflash kwesikhumba kumagundane. Ijenali yokuhlinzwa kwepulasitiki nokuhlinzwa kwezandla, 49(6), i-358-362.
UPorst, uH., URoehr kuzaliwa, uCG, uSecrest, uRJ, u-Esler, u-A., kanye noViktrup, uL (2013). Imiphumela ye-tadalafil kwizimpawu ezisezingeni eliphansi lomchamo wesibili ezilinganisa i-benign prostatic hyperplasia kanye nasekuhlukaniseni i-erectile emadodeni enza ucansi kanye nazo zombili lezi zimo: Ukuhlaziywa kwedatha efakiwe kusuka ezihlolweni ezine zokwelashwa ezingalungiswa, ze-placebo ‐. Umagazini wezokwelapha ngokocansi, 10(8), i-2044-2052.